Miidhaan Godinaa Keenya Keessatti Raaw’atame Kan Addatti Saba Tokkotti Xiyyeeffate Miti, Jedhu Bulchaan Arsii Lixaa
Adoolessa 07, 2020
Faayilii - Arsii Lixaa magaala Kafalee yeroo mormii Oromiyaa bara 2016 keessa
Wixata torban darbee erga artist Haacaaluu Hundeessaa irratti ajjeechaan raawwatamee qabee Naannolee Oromiyaa adda addaa akkasumas guutummaa addunyaa irraa mormiin dhaga’amaa jira. Erga ajjeechaan kun raawwatamee booda godinaalee oromiyaa tokko tokko keessatti jeeqamni uumamee qabeenyaa fi lubbuun namaa baduun illee gabaasamaa jira.
Namoota qabeenyaan keenya manca’ee maatiiwwan keenya nu duraa ajjeefaman jedhan waahila afaan Amaaraa Tsion Girmaaf kaleessa ibsanii jiru. Namoonni kun akka himatanitti haleellaan raawwatame saba isa tokko kaanittii adda baasee ti jedhan.
Nutis kana irraa ka’uu dhaan bulchaa godina Arsii obbo Jamaal Aliyii dubbisneerra. Obbo Jamaal akka jedhanitti qabeenyaan manca'es ta'e namoonni ajjeefaman saba isa kamiinuu adda kan baase miti, hundumaa irratti raawwatame jedhan. Kanneen sabaa fi sabni akka wal irratti ka'an fakkeessuu dhaan nagaa biyyaa jeeqantu olola akkasii oofa jedhan.
Jilli Ertraa Guyyaa Sadiif Masrii Keessaa Turee Deebi'ee Jira
Paarlaamaan Itiyoophiyaa Bajata Waggaa Raggaasise
Oromiyaa Keessatti Namnii 155 Ajjeefameera: Komishinar Araarsaa Mardaasaa
Komishinarri Komiishina Mirga Dhala Namaa Itiyoophiyaa Hogganoota Siyaasaa Hidhaman Waliin Dubbachuu Isaanii Ibsan
Tiraampi guyyaa bilisummaa USA,Adoolessa 4 South Dakota gaarren Rushmore soodduu pirezidaantota Amerikaa biratti ulfeesse